एमाले–एमाले मुठभेडतिर ! सडकबाटै प्रतिकारको उद्घोष – Ktm Dainik
एमाले–एमाले मुठभेडतिर ! सडकबाटै प्रतिकारको उद्घोष - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
कार्टुन साभार : राजेश केसी को ट्विटरबाट
‘आज केपी ओलीले बालकोटमा बसेर माधव नेपालहरू प्रति वक्रदृष्टि लगाइरहनुभएको छ । ओलीको वक्र दृष्टिकोण न्यायालयप्रति पनि ठडिएको थियो । तर न्यायालयले केपी ओलीको वक्र दृष्टिकोणको औँलालाई काटिदिएको छ । अब माधव नेपालहरूप्रति ठड्याएका वक्र दृष्टिकोणहरू समाप्त पार्ने हो । यसका लागि अनेरास्ववियु लाग्छ । यसैका लागि हामीले अखिल फोर्स गठन गरेका छौँ । साइबर स्यालहरू हाम्रो नेताप्रति विभिन्न ढङ्गले सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली गरिरहेका छन् । अखिल फोर्सले ती साइबर स्यालहरूलाई भौतिक रूपमा पहिचान गरेर कारबाही गर्नेछ र यसको नेतृत्व अनेरास्ववियुले गर्नेछ । अखिल फोर्सले गर्नेछ । त्यस विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्न गठन गरेका हौँ ।’
बिहीबार अखिल फोर्स गठनपछि नेकपा(एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले भने । अखिलले तपेन्द्रजंग शाहीको नेतृत्वमा ५०१ सदस्यीय अखिल फोर्स गठन गठन गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको युवा संघले युथ फोर्स पुनर्गठन गरेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले बिहीबार अखिल फोर्स गठन गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच नेपाल निकट अनेरास्ववियुले अखिल फोर्स गठन गरेको हो ।
तीन दिन अगाडि फर्कौँ । मङ्गलवार एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षले पनि यूथ फोर्स पुनर्गठन गरेको थियो । युवा सङ्घले पुनर्गठन गरेको यूथ फोर्स पनि ५०१ सदस्यीय छ । जसको नेतृत्व क्षितिज थेबेलाई दिइएको छ । नेकपा एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भएपछि त्यसको प्रतिकारका लागि यूथ फोर्सलाई ब्युँताएको युवा सङ्घ नेपालका इन्चार्ज महेश बस्नेत बताएका थिए ।
‘यूथ फोर्स फेरि जन्मिएको छ । यूथ फोर्स सिरानमुनी राखिएको खुकुरी जस्तै हो,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो र सङ्कट पर्‍यो भने यसलाई फेरि निकालिनेछ । यसले नेकपा एमालेको सिद्धान्त विचारको रक्षा गर्ने छ । यसले आवाज विहीनहरूको आवाज उठाउन भूमिका खेल्ने छ ।’
उनको भाषण पनि स्मरण गरौँ । ‘यूथ फोर्स फेरि जन्मिएको छ । यूथ फोर्स सिरानमुनी राखिएको खुकुरी जस्तै हो,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो र सङ्कट पर्‍यो भने यसलाई फेरि निकालिनेछ । यसले नेकपा एमालेको सिद्धान्त विचारको रक्षा गर्ने छ । यसले आवाज विहीनहरूको आवाज उठाउन भूमिका खेल्ने छ ।’
सडकमा ताण्डव !
एमाले न एक न अनेक जस्तो। विभाजन सँघारमा रहेको एमाले मिल्न पनि सकेको छैन छुट्न पनि सकेको छैन । नेतादेखि कार्यकर्ताहरू एक अर्को विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिसकेका छन् । बुधवार बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि अध्यक्ष ओलीलाई अर्को नेता माधव नेपालको नामै लिएर निर्किष्ट शब्दमा लाल गद्दाको संज्ञा दिएका थिए ।
उनको अभिव्यक्ति पनि हेरौँ न । ‘पछाडि लाग्नेहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूले कमीकमजोरी महसुस गरेर पार्टीमा आएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मौका दिन्छौँ । तर माधव नेपालको हकमा आत्मालोचना, गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्ने कुनै ठाउँ छैन । माधव नेपाल जस्ता गद्दारलाई कुनै क्षमा गर्न सकिन्नँ ।’
माथिका दृश्यले के सङ्केत गर्छ ? दुई युवा फोर्सका इन्चार्जका अभिव्यक्तिले के सङ्केत गर्छ ? बस्नेत र पराजुलीका अभिव्यक्तिको सोझो अर्थ हो आइपरे एकअर्कोविरुद्ध भिड्ने ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश दिएसँगै सडकमा उत्रिएका एमालेका युवाले मुठभेडको सङ्केत दिइसकेका छन् ।
साइबर स्यालहरू हाम्रो नेताप्रति विभिन्न ढङ्गले सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली गरिरहेका छन् । अखिल फोर्सले ती साइबर स्यालहरूलाई भौतिक रूपमा पहिचान गरेर कारबाही गर्नेछ र यसको नेतृत्व अनेरास्ववियुले गर्नेछ । अखिल फोर्सले गर्नेछ ।
सर्वोच्चको फैसला लगत्तै प्रधानन्यायाधीशसमेतको पुत्ला दहन गरेका उनीहरूले नेता नेपालविरुद्ध पनि चर्का नारा लगाए । पुत्लासमेत दहन गरे । नेता नेपालको घर घेराउ गर्नेसम्मका चेतावनीहरू दिए ।
राजनीतिको पछिल्लो पुस्ता अब वैचारिक राजनीति छोडेर भौतिक रूपमा भिड्ने मात्रै हो ? त्यसलाई विगतका वाइसिएल र युथफोर्सका गतिविधि स्मरण गरे पुग्छ । अब एमालेकै दुई युवाजथ्था पनि उस्तै परे भिड्ने तयारीमा देखिन्छन् । त्यसलाई उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरिसकेका छन् ।
एक अर्का विरुद्ध सार्वजनिक रूपमै प्रतिरोधमा उत्रिएका उनीहरू कुन दिन आमने सामने हुन्छन् भन्न सकिन्न । कोभिड महामारीका बेला युवा सङ्घले सडकमा देखाएको ताण्डवले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने युवा नेताहरूबाटै नै प्रतिकारमा उत्रिन तयार रहेको प्रतिक्रिया आउनु सामान्य विषय होइन ।
यसले नेपाली राजनीतिक विकृत रूप पनि देखाउँछ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग नमिलेको बताउने ओलीले नै बालुवाटारबाट बाहिरिँदा सडक नृत्य देखाए । हुल बाँधेर बालकोट गए । सडकमा तामझाम गरे । योभन्दा दुखद अरू के हुनसक्छ ?
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रवार, साउन १ २०७८ १५:१६:१५